4 nzira dzisingaremi kune Mozilla Thunderbird | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla iri kugadzirisa yayo yewebhu browser, zvisinei haisi iyo yega Foundation chirongwa chatinoshandisa. Pachine vazhinji vashandisi vanoshandisa email mutengi, mune ino kesi Mozilla Thunderbird. Asi nerombo rakanaka haisi iyo yega email mutengi kunze uko kweGnu / Linux.
Kune akawanda dzimwe nzira dzakangofanana neMozilla Thunderbird uye mamwe ayo, kunyangwe asiri kupa zvakafanana, anoshanda uye akareruka kumakomputa ane zviwanikwa zvishoma. Tichakuratidza dzimwe nzira ina dzeMozilla Thunderbird dzinowanikwa mune ese epamutemo marekodhi uye kuti isu tinogona kuamisa nekuishandisa.
Wokutanga wavo ane mukurumbira, akura uye anoshanda. Sylpheed mutengi weemail uyo haangotipe email chete, asiwo mukana weakawandisa-account, GPG siginecha uye iyo shanduro ye html mameseji. Uyu mutengi haana zvemunhu kana karenda asi zvinoshanda kana zvasvika pakutumira nekugamuchira maemail. Iwo ekutanga mabasa ayo wese mushandisi anotarisa anowanikwawo muSylpheed. Nekudaro, pamusoro pekutumira maemail, tinogona Sefa uye utsvage ivo nematanho ekutanga yeiyo email mutengi.
Iyi email mutengi yakareruka asi zvakare ine mashoma maficha. Balsa inotsigira manejimendi eakaundi maemail account, zvakare inotsigira IMAP uye POP maprotocol. Tinogona kuwana muBalsa zvakakosha mabasa sekumaka maemail, kutsvaga maemail, kuaisa iwo, nezvimwe ... Asi Hatizove nedzimwe sarudzo senge encryption yeemail kana kugadzirisa masiginecha mu html. Hatisi kuzowana makarenda kana zvigadziriswe kuburikidza nemapulagi chero. Chinhu chinoita kuti Balsa ave mutete mutengi.
Kana isu tiri kutsvaga yekupedzisira email email mutengi, Alpine ndiyo mhinduro. Saka mwenje ndeyeAlpine iyo inongoshanda mune terminal, haina graphical interface. Uyu mutengi akakosha uye kunyangwe zvingaite senge zvakaoma kushandisa, nekuda kwemaitiro eiyo terminal, chokwadi ndechekuti Alpine iri nyore saNano, iyo Linux kodhi mupepeti. Alpine haitenderi kuverengwa kwemafaira mu html uye mune mamwe mafomati asingaenderane neiyo terminal, asi inotsigira akawanda-account manejimendi pamwe nePOP uye IMAP maprotocol.
Kana Alpine iri chirevo chiri nyore, tinogona kutaura kuti Trojita mhinduro yepakati. Trojita inoshanda chete neIMAP protocol zvinoreva kuti tinofanirwa kuve neinternet yekubata kuti tishande. Kana tangove nekubatana, Trojita inozotarisira ese maemail edu ari kure, izvo zvinoita kuti chirongwa chiwedzere kujeka. Tine zvekutanga mashandiro uye tinogona kuverenga html mafaera uye kunyange kuwedzera mapfupi ekhibhodi uye mamwe marongero emunhu. Trojita yakanakira avo vane yavo iri kure mail server uye vanoda kuitarisira kubva kumakomputa avo.
Kuwana yakanaka email mutengi kwakaoma. Mozilla Thunderbird yakanaka kwazvo uye inonetsa kutsiva; asi kana ndichifanira kusarudza imwe nzira, ini ndinogona kusarudza Sylpheed. Ichi chirongwa chakazara uye chakareruka kupfuura Thunderbird. Dzimwe sarudzo dzakanakisa, asi dzinoshaya mamwe mabasa uye pane dzimwe nguva, kusavapo kwavo kunogona kutsamwisa. Chero zvazvingaitika, Kana isu tiine maakaundi maemail maakaundi, tinogona kugara tichiedza sarudzo ina uye tosarudza kuti ndeipi yakanyanya kunaka sarudzo kwatiri..
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » 4 dzimwe nzira dzisingaremi kune Mozilla Thunderbird
Zvese zviri kuitwa neMozilla muFirefox zvakanaka, asi siya Thunderbird padivi sezvavari kuita… ummmm ndinovimba kuti pavanosvika kwavanoda kuenda neFirefox vachatangazve kuvandudza Thunderbird.
Ndinoziva kuti makore mashanu apfuura vakati zvaive zvisisiri zvekutanga uye vakamisa kuvandudzwa kwayo (kunze kwekuvandudzwa kwekuchengetedza, izvo zvisiri zvishoma) ... asi nharaunda yanga yakamirira kubvira ipapo kuti vatore faira.
Uye ini handipokane kuti dzimwe nzira dzakatsanangurwa dziri nani (zvirinani mune zvimwe zviitiko) asi kana wapedza makore nemakore nechirongwa chirongwa chinoda humwe hunyanzvi nemaitiro ... shanduko dzakaomarara.
Zvisinei hazvo ndichaedza Sylpheed (ehe, linux hazvo, ndiri UI nyama :-D)
Ndatenda neruzivo. Ini ndakaramba ndakafanana nemutinhiro hahaha
Pindura kuna Edward